Nhungamiro yeKiya kana Tsvaga Yako Yakarasika iPhone | IPhone nhau
Idzi nguva dzemhemberero dzinobatsira kune mbavha uye zvisina ruzivo musanganiswa wakashata. Mikana yeku "kurasikirwa" kana kuve nenharembozha yedu yakakosheswa kubva kwatiri inowedzera zvakanyanya, zvese nekuda kwekudzivirira kwakaderera nekuda kwemafaro mamiriro, uye nekuda kwemamiriro ezvinhu anobatsira kubiwa kwezvinhu zvedu. Naizvozvo, negwara rino rekukiya kana kuwana yako yakarasika iPhone, tichaedza kuti vashandisi vakadzoserwa kubva kune yavo iPhone vawane diki reyi yechiedza murima rakanyanya. Isu tinoendako nezano rekutanga uye matipi ekudzosera edu Apple iPhone zvishandiso.
Uye zvinowanzoitika nezve nhare mbozha dzinodhura zvakanyanya, idzo mumitemo yazvino yeSpain inogona kunge iri mhosva yakakura. Tinoda kurangarira kuti uyu mutungamiriri unoshandiswa kune izvo zviitiko umo chishandiso chakarasika nekuda kwekuvhiringidzika, kana chakabiwa kubva kwatiri pasina chero mhando yebavha, kutyisidzira kana mhirizhonga mamiriro.
Dzikama, tsvaga chishandiso chinokwanisa kuwana iCloud: Kana isu takaita rombo rakanaka, uye tichangoti tarasikirwa nefoni yedu, tinogona kuenda ku www.icloud.com uye tinyore "Tsvaga" application. Ikoko, isu tichawana akawanda mikana. Kana mudziyo wedu uchinge uine SIM kadhi yako, kana yakabatana kuburikidza neWiFI, inozoiwana ipapo ipapo. Uye zvakare, ichatiratidza kuti bhatiri rakakura sei nharembozha yedu yasara, kuitira kuti titore pfungwa shoma yekuti ichagara kwenguva yakareba sei. Kana tangoiwana, tine dzimwe nzira nhatu.
Emit kurira: Izvo zvinotibvumidza isu, nekuda kwechiratidzo cheacoustic, kuti tikurumidze kudzorera nharembozha yedu, sezvo tichigona kuiwana nyore.
Yakarasika Mode: Iyo yakarasika modhi ichaitwa kuti ishandiswe parunhare mbozha, iyo ichaita kuti irambe yakakiiwa, ichiratidza ruzivo rwekufambidzana rwemushandisi akaruza, uye nokudaro zvichiita kuti zvive nyore kune chero munhu anozviwana kuti azvidzorere kwatiri nekukurumidza sezvazvinogona.
Bvisa iPhone: Iyi ndiyo nzira yedu yekupedzisira, kana tisina tariro yekuitora, tinogona kuidzima kuti ruzivo rwedu rwukwanisike. Zvisinei, kana tine kiinura remitemo, havazombokwanisi kukwanisa kuba chero mashoko kubva iPhone wedu.
Chenjerera kambani yako kuti hauna mudziyo: Nenzira iyi, kambani yemafoni ichakwanisa kumisa nharembozha kana internet traffic, kuona kuti chero munhu anoitora kubva kwatiri haazowana chero rudzi rwemari yekubhadhara. Ichi chiyero hachikurudzirwi isu tiine chishandiso chiripo, nekuti nekuda kwekubatana kwe3G tichakwanisa kuramba tichiziva mamiriro ayo uye kuwana zvakanakisa kubva mukugona kwe «Tsvaga yangu iPhone»
Kiya chishandiso chako neIMEI: Iyi ndiyo sarudzo yekupedzisira, kana isu tisingakwanise kutsvaga chishandiso chedu kuburikidza chero nzira, isu tinofanirwa kuivharisa neIMEI. Izvo hazvinyanye kudikanwa, nekuti chengetedzo yeIOS inotivimbisa kuti mudziyo wedu haugone kudzoreredzwa uye kushandiswazve pasina Apple ID yedu, asi kudzivirira kuri nani pane kurapa, nekuti izvi tichazotaura nemakambani edu enhare panhamba dzinotevera dzinobata:
Isu tinotora mukana uno kukuyeuchidza kuti hatifanire kuve nekushinga nekugona kwekutsvaga iPhone yedu, kuuya kunetsana nemunhu akatibira chishandiso kubva kwatiri kunogona kuva nemhedzisiro inouraya, saka, tinokurudzira kuti iwe ugare uchienda kune zvakavanzika vekuchengetedzwa kwenzvimbo yaunosangana, pamwe ne iyo yepedyo yekuchengetedza vagari mabasaKunyangwe iri Yemunharaunda Mapurisa, National Mapurisa kana Civil Guard, ivo vanozoziva maitiro ekudzoreredza chako chishandiso uchichengetedza akakodzera machengetedzo matanho.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mune zviitiko zvekuba kwakakura kwakadai, tinogona kuenda kumbainishuwarenzi iyo mhuri zhinji dzakabvumirana. Rudzi rweinishuwarenzi runowanzo sanganisira mitsara inodzivirira aya mamiriro, nekudaro, nerombo rakanaka uye kana watambura kuba, unogona kuenda kuchirongwa uye kudzikisira kukuvara, chero bedzi usina inishuwarenzi chaiyo yefoni yako .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Wakafirwa here yako iPhone? Tungamira kukiya kana kuwana yako yakarasika iPhone
3 emahara maapplication nemitambo yenguva yakatarwa yekutanga gore